အဆိုပါလက်သည်းပေါ်တွင်လှပသော monograms - ရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာတစ်ခုမူရင်းဒီဇိုင်း, သုံးရှုထောင်ရေးဆွဲ, monograms နှင့်အတူခရစ္စမတ်နောက်ပြီး
အဆိုပါလက်သည်းပေါ်တွင် Monogram - အားလုံးအရသာကိုက်ညီဖို့စတိုင်ဒီဇိုင်းများ 66 ဓါတ်ပုံ
အဆိုပါလက်သည်းပေါ်တွင် Monogram - လုံးဝအပေါငျးတို့သပုံရိပ်တွေများအတွက်စံပြဖြစ်သည့်မူလပုံစံ။ Laconic အပေါ်ဆံပင်ကောက်ကောက် ဝတ်လစ်စလစ်အခြေခံ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့များအပြင်, ဇာအနည်းဆုံး၏ဝိညာဉ်အတွက်ကိုချုံ့ - အရှေ့ပိုင်းစတိုင်နေ့စဉ် ensembles နှင့်ဇိမ်ခံနောက်ပြီးမှ - အားလပ်ရက်မတ်မတ်များအတွက်ခေတ်သစ်ဖြေရှင်းချက်။
လက်သည်း 2018 အပေါ် Monogram
စတိုင်နောက်ပြီး Monogram 2018 အညီအမျှအဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်တိုတိုနဲ့အလွန်ရှည်လျားပျော့ပျောင်းသောဗာဒံသီးစတုရန်းမဟုတ်ပါ, လက်သည်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ကြီးမြတ်လှပါတယ်။ အဆိုပါဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာများလက်သည်းပန်းချီနှစ်သစ်ကူးရဲ့အားလပ်ရက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေ့လျော်?
ချောကလက်, အနက်ရောင်, မြင့်မြတ်သောပြာမှောင်မိုက်အနီ, burgundy နှင့် Marsala, ခရမ်းရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်: Vogue အတွက်အရောင်များပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ ရာသီအလိုက် hits - အဝါရောင်, အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့် pastel, နူးညံ့သိမ်မွေ့ဝတ်လစ်စလစ် နဲ့ဖြူ၏။
အဆိုပါပုံစံအနက်ရောင်နှင့်အနီ, အဖြူနှင့်အပြာ, အစိမ်း၏အရိပ်နှင့် "ငွေ", "ကိုရွှေ" ၏ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်တစ်ခုလုံးကိုအရောင် palette နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်, ထိုဆနျ့ကငျြဘရက်နေ့တွင်လျှောက်ထားနှင့်တော်ဝင်စကေးဖြစ်ပါသည် - အဖြူအနီနှင့်အနက်ရောင်အမြဲသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါလက်သည်းပေါ်တွင် Monograms အပေါငျးတို့သလက်ချောင်းမှလျှောက်ထားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်ပွင့်လင်းထုံးစံ၌ရှိသကဲ့သို့တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလက်သည်း၏ရွေးချယ်ရေးအားပေးတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လွှမ်းမိုးအရိပ်။ အားသာချက်များကိုမဆိုဂျာကင်အင်္ကျီ၏ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ကြီးမားသောယူနစ် monograms ကြည့်ရှုဖြစ်စေသည့် openwork ပန်းကန်ကိုဖြတ်ပြီးသေးငယ်တဲ့လောကဓာတ် coating ။
ယခုရာသီ၏ဦးတည်ချက်ခေတ်စား - ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးနှင့်အရှေ့တိုင်း chic ပေါင်းစပ်တဲ့အတိုအရှည်ပေါ်တွင်တင်သဘာဝလက်သည်းဒီဇိုင်း, monogram ချွတ်, ရုပ်ပုံများရောမွှေပါ။ non-အသေးအဖွဲမူကွဲ: လက်သည်းများနှင့်ပန်းရောင်ဂျယ်ယွန်း, အဖြူရောင်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်လက်သည်းပုံသဏ္ဍာန်တခုတခုအပေါ်မှာတန်ဆာဆင် edging အပေါ် "ရွှေ" ရိုးရှင်းသော monogram, ပန်းချီနှင့်အတော်ကြာလက်ချောင်းပေါ်မှာအာရုံနှင့်အတူသုံးရှုထောင်ပုံစံအမှုန့်သို့မဟုတ်သဲနှင့်အတူတောက်ပဂျာကင်အင်္ကျီ။ လူကြိုက်များတိုတောင်းသောဘဲဥပုံ, ဖက်ရှင်ထွက်သွားမစတုရန်းနှင့်ဂန္အသံထွက်သည်မဟုတ်, အနည်းငယ်, "ဗာဒံသီး" ပုံသဏ္ဍာန်ထောက်ပြ
အခြေအနေမြင့်မားတဲ့ဖက်ရှင်အားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမည်သို့ပင်, အမြဲလက်သည်း၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်ကျော်လျှောက်ထားခဲ့သည့်သက်ဆိုင်ရာ elongated ဒီဇိုင်း, monogram ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအတူလက်စွဲများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုနှင့်တစ်လက်ချောင်းပေါ်မှာပင် openwork - ပြီးသားအားလပ်ရက်လက်သည်းပန်းချီ။ ချွန်ထက်များနှင့်အနီရောင် stilettos, လက်သည်းအများဆုံးအရှည် - -5မီလီမီတာ, mod ပုံစံ - ဘဲဥပုံ stylist အားဖြင့် "no" ဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းသောတညီတညွတ်တည်း။
တစ်ဦး Matt ရောင်စုံအပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူရှည်လျားသောလက်သည်းပေါ်တွင် monograms: Beige, ပန်းရောင်နှင့်တစ်ဦးပွင့်လင်းယွန်းပေါ်မှာအနက်ရောင်ပုံစံ;
Marsala, burgundy နှင့်ခရမ်းရောင်ရတဲ့အရာတွေအခြေစိုက်စခန်း, အဖြူရောင်ရိုးရှင်းသောလက်သည်းသို့မဟုတ်အေးစိမ့်သောဆံပင်ကောက်ကောက်အပေါ် monogram, ထိုညွှန်းကိန်းအပေါ်အလေးပေးပြောင်း, အလယ်တန်း, လက်စွပ်လက်ချောင်းများ, ဒါမှမဟုတ်တလက်ပေါ်မှာ - နှစ်ခုအပေါ်ကို၎င်း, ဒုတိယ - ငယ်လက်ချောင်းပေါ်မှာ;
အလင်းပန်းရောင်သို့မဟုတ်အဝါနုရောင်ရှိသော Matt ယွန်းအနည်းငယ်လက်သည်းပေါ်တွင်ဘဲဥပုံနှင့်လပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာလက်ညှိုးနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်အပေါ်အဖြူပုံစံများ;
ခေတ်သစ်နောက်ပြီးစိတ်ကူးများ: Monogram ချောမွေ့ပြောင်လက်ဒီဇိုင်း - တစ်လက်သည်းပေါ်တွင်နှစ်ခု curly ဆံပင်ကောက်ကောက်ထက်ပိုမ; တစ်ခုလုံးအရှည်ကျော်အရှေ့တိုင်းပုံစံ, နှစ်ဖက်စလုံးထိပ်တန်းသို့မဟုတ်လလက်သည်းပန်းကန်ပေါ်တွင်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်ခုအချိုးမညီအစီအစဉ်။ လမ်းကြောင်းသစ်ကြံစည်မှုဖွဲ့စည်းမှု: တဦးတည်းဒီဇိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်ပုံစံများခြံဝင်း, ရွေးချယ်ရေးလိုင်းများမူလတန်းအရောင်သို့မဟုတ် "သဘာဝက" အပေါ်ယံပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းပေါ်လသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းဇုန်ဘက်စုံပုံစံ openwork ။
မှောင်မိုက်-ပန်းရောင်တောက်ပြောင်သို့မဟုတ် Matt အခြေစိုက်စခန်း၏မူလပေါင်းစပ်, လက်သည်းများနှင့်အမှုန့်ပေါ်အနက်ရောင် monogram; ကို "ကိုရွှေ", "ငွေအ" သို့မဟုတ်အဖြူအရောင်မှာအစိမ်းရောင်အရောင်များနှင့်ပုံစံများကြွယ်ဝတဲ့အရိပ်။ Light ကပန်းရောင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ crystals သို့မဟုတ် ", ငွေ" ၏ဖြစ်နိုင်သောပါဝင်နိုင်နှင့်အတူဖျော့အပြာဂျယ်ယွန်းနှင့်အဖြူအဆင်တန်ဆာ - အဘို့ကြီးစွာသောစိတ်ကူး နူးညံ့သိမ်မွေ့ပွဲလမ်းသဘင်နောက်ပြီး ပင်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံအောက်မှာဿုံ fit သော။
monograms နှင့်ဆံပင်ကောက်ကောက်ဖက်ရှင်မှောင်မိုက်အရောင်ရနှင့်အတူစတိုင်ဒီဇိုင်းကိုလက်သည်း, အထူးသဖြင့်ထိရောက်စွာပွင့်လင်းဒေသများနှင့်အတူအနက်ရောင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ crystals: ဖက်ရှင်နဲ့ပေါင်းစပ် monograms, ဆံပင်ကောက်ကောက်, ဂျီဩမေတြီ fuzzy လိုင်းများ, အစက်နှင့် variegated အလှဆင်ပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါလိမ်းပုံစံများနှင့်အတူအပြာ-အဖြူအပြာ-အဖြူကိုပေါင်းစပ်ထဲက kamifubuki နှင့်အသေးစားသတ္တုလက်ဝတ်ရတနာ။
အခွန်ဆက်ဂန္ retro - whorl နှင့် monograms တိုတောင်းသောလက်သည်းတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူ "သဘာဝ" အရောင်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန် - ပြင်သစ်နှင့်ပြင်သစ် strass အင်းလေးနှင့်အတူလအားဖြင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းပေါ်နှင့်ကျန်ရှိသောလက်သည်းပေါ်တွင်ခြယ်ပုံစံဖြည့်စွက်။ အချိုးမညီဇာပုံစံ, လက်သည်းတစ်ဒေါင်လိုက်-လျှောက်ထားတစ်ဝက်နှင့်အတူပန်းရောင်နှင့်အနက်ရောင်အရောင်ဂရိတ်နောက်ပြီး။
monograms နှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူနောက်ပြီး
တစ်ဦးပွဲလမ်းသဘင်ညဦးနှင့်နောက်ပြီးများအတွက်တိုက်ရိုက်ဘုံကိန်းဂဏန်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောလက်ချောင်းများအတွင်းချွတ် monograms, ဇာနှင့် strass placers ပေါင်းစပ်ပေါ်လာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးအဘို့ကြီးစွာသောဒီဇိုင်းလုပ်အဖြူနှင့်အပွင့်လင်းသောဗားရှင်းအတွက်လက်သည်း monogram နှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း:
ရိုးရှင်းတဲ့နောက်ပြီးသုံးယောက်ရှုထောင်ပုံစံနှင့်အတူအဝါနုရောင်ရှိသောနှင့် milky အဖြူ;
ရွေးချယ်ရေးလသို့မဟုတ် openwork ဘောင်လိုင်းသေးသေး crystals ။
hot hits - လှပသောအသံအတိုးအကျယ်ဂရပ်ဖစ်၏အသွင်အပြင်ပေးသောလက်သည်းပေါ်တွင် monogram ဖောင်းကြွ။ ကြီးမားသောစီတန်းမှုန့လမ်းကြောင်းသစ်ပုံစံများနှင့် openwork stempingovye တောက်ပထုတ်အတွက်ခြေရာခံနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဆင်တန်ဆာများနှင့်အတူ။ ကျစ်, "webs" ရှေ့နှင့် seamy ချောမွေ့မျက်နှာပြင်: အလက်သည်းပေါ်တွင် Monogram အေးစိမ့်သော rime ၏ပုံစံ, ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဂီတဇာတ်ကောင်ကွေး, ဂျီဩမေတြီနှင့်စိတ္တဇပုံစံမျိုးစုံနှင့်ဖှဲ့ပုံစံများအမျိုးမျိုးအောက်ပါအတိုင်း။ ကြော့ "ရွှေ" သို့မဟုတ်အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အရောင်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့အညီ "ငွေ" အရှေ့တိုင်းအဆင်တန်ဆာ။
အဆိုပါလက်သည်းပေါ်ကြော့ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့ monogram - အနုပညာနီးပါးတစ်ဦး Canon, Neo-ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်း:
တဦးတည်းအတွက်သုံးပေါင်းစပ်: ပြင်သစ်အပြုံး, venzelnymi ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူ "ဟောလိဝုဒ်" ဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံ;
အပြုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပွငျသစျနှင့်ပုံစံ၏ Alternative ၏လက်သည်းပေါ်တွင် monogram;
"Mindalka" သို့မဟုတ်မဟုတ်5မီလီမီတာမှ2မီလီမီတာ မှစ. , လက်သည်း၏ပျမ်းမျှအလျားအပေါ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်အသံထွက်;
တဦးတည်းနောက်ပြီးအတွက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအရောင်များပေါင်းစပ်: အပြာ, အနီ, အဖြူ, အဝါနုရောင်ရှိသော, ပန်းရောင်နှင့် "ကိုရွှေ";
အပိုဆောင်းအသံထွက် straza အချက်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရေးလိုင်းများပြုံးပြတယ်;
အမြဲတမ်းပေါ် မူတည်. - ထိုလက်သည်းပေါ်တွင်ဇာနှင့်တစ်ခုတည်းအလင်း monogram, အတောက်ပအရောင်တင်ဆီခြေရာခံ။ fishnet ထုတ်, ပန်း motif နှင့်အသေးစားကျောက်များနှင့် crystals ၏ monograms ပေါင်းစပ် - ဘာပဲအခြေခံသည် "ရွှေ" လို့ကျက်သရေနှင့်ဇိမ်ခံကား, လမ်းကြောင်းသစ်ပုံစံများမှထပ်ပြောသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးပွားနှင့်အတူရှုပ်ထွေးနှင့်ရိုးရှင်းသောအဖြစ်, ဝေးကြော့အရှေ့တိုင်းပန်းချီနှင့်လက်သည်းပေါ်တွင် "ရွှေ" လွင်ပြင် monogram နောက်ကွယ်မှမရှိကြပေ။
ဒီနောက်ပြီးကဲ့သို့သင်တို့အနီနှင့်ခရမ်းရောင်တန်ချိန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်ဆိုပါကအလွတ်သဘောဖို့အကောင်းဆုံးအဖြည့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံ နှင့်စမတ်ပေါ့ပေါ့ပုံရိပ်တွေ။ ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်, နက်ပြာရောင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့် "ရွှေ" - သူတို့ကိုယ်သူတို့စားဆင်ယင် code တွေရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို dictate သူကိုညဦးယံအချိန် wear အဘို့နှင့်စီးပွားရေးအမြိုးသမီးမြားအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်, နှင့်အဖြူရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ရွှေ monogram အချည်းနှီးသတို့သမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့စဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။
တတန်းအတွက်နှစ်လက်သည်း, monograms နှင့်မူရင်းဆံပင်ကောက်ကောက်အပေါ်ဖက်ရှင် "ဟောလိဝုဒ်" အပြုံးနှင့်ရေးဆွဲထဲကမဟုတ်ပါဘူး။ စမတ်-ပေါ့ပေါ့ဖက်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးခြားနားအဖြူ, အနီ, "ငွေ" ၏ပုံစံနှင့်အနက်ရောင်ဖို့လျှောက်ထားသော, အစိမ်းအညို, ပန်းရောင်, မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူနှင့်အနက်ရောင်အစီအစဉ်အတွက်လုပ်နေကြသည်။ မူရင်းမျိုးကွဲ: ရွေးချယ်ရေးလ crystals နှင့်အသေးစားကျောက်, ဖောင်းကြွနှင့်ချောမွေ့ openwork, တစ်ခုလုံးလက်သည်းများနှင့်အချိုးမညီအပိုင်းအစများအပေါ်ပုံစံ, အရောင်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်အရိပ်တစ်ခုပေါင်းစပ်။
ရာသီ၏အဓိကထိခိုက် - တစ်ကယ်ဆယ်ရေးစိမ်း, အမှုန့်ထွက်ချထားသည့် monograms နှင့်အတူအပြာနှင့်အနီနောက်ပြီး။ ကတ္တီပါအသံအတိုးအကျယ်ကိန်းဂဏန်းများယက်ပုံစံများဿုံလမျက်နှာပြင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နေကြတယ်, အလတ်စား-အရှည်နှင့်တိုတောင်းသောလက်သည်းပေါ်တွင်အကြီးအကြည့်နှင့်ဖက်ရှင်အေးစိမ့်သောအဆင်တန်ဆာများနှင့် monogram pastel တန်ချိန်အတွက်လက်သည်းပေါ်တွင်နဲ့သတိပညာရှိအရောင်အားလပ်ရက်အဘို့ကြီးသောရှေးခယျြမှုသာခြားနား, ဒါပေမယ့်လည်းဆောင်းတွင်းရက်နေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ခြံကိုအလှဆင် ။
, monograms ၏လျှောက်လွှာအဘို့အနီနှင့်အပွင့်လင်းမူဘောင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်တစ်ခုပေါင်းစပ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းပေါ်တွင်အလေးပေးအတူစိတ္တဇဂျီဩမေတြီသို့မဟုတ်စက်ရုံ motif ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့် openwork: ပြည့်နှက်အနီရောင် palette အဖြူနှင့်အနက်ရောင်အဆင်းအရောင်, mod စိတ်ကူးအတွက်ပုံစံများနှငျ့ကိုကျညီ။ ဒါဟာ gradient ကိုနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလက်သည်းအမှုန့်သို့မဟုတ်တောက်ပနေပေါ်ဆွဲအများအပြားလက်ချောင်းများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူနောက်ပြီးကြည့်ဖို့သွေးဆောင်သည်။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, သငျသညျအမွဲလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူသည်မီးခိုးရောင်ပေါ်လက်သည်းပေါ်တွင်အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်မုန့်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ monogram ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် - ကအားလပ်ရက်ဒီဇိုင်းမဟုတ်လား လက်သည်းအနုပညာမာစတာကဒီ palette တစ်ဦးခြားနားအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တန်ချိန်အတွက်၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပုံစံ diluting, လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, သတိပညာ strass ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖြည့်ဆည်း။ အဆိုပါရလဒ်စတိုင်အနည်းငယ်မျှသာနှင့်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားတစ်ဦးမတူနိုင်တဲ့ခရစ္စမတ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ ပုလဲ vtirka နီးပါးမဆိုမတ်မတ်များအတွက်သင့်လျော်သောစုံလငျကြားနေဖြေရှင်းချက် - အဖြူ monogram နှင့်အတူနက်ပြာရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ။
အပြာနှင့်အစိမ်း၏အပေါငျးတို့သအရိပ်မပါဘဲသစ်ကိုတနှစ်အဘို့အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးပွဲလမ်းသဘင်နောက်ပြီး? သင်သွားလေရာရာ၌စူပါစတိုင်နှင့်မှော်ညတကယ့်မျက်စိ-ဖမ်းဖြေရှင်းချက် - ကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့ကျောက်များနှင့်အတူလက်သည်းပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသော monogram, အရွယ်အစား rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်အတွက်ရောင်စုံများနှင့်မတူညီကြ, က "ရွှေ" ဝိုင်း ", ငွေ" နှင့်အဖြူပုံစံများ, သူဌေးအခြေခံပေါ်မှာ velvety အပေါ်ယံပိုင်း ဒါကြောင့်ထွက်သယ်ဆောင်မပေးပါ။
ဆံပင်အရောင် - ဖက်ရှင် 2014
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Tracksuits Reebok 2013
စားဆင်ယင် Uliana Sergienko 2013
အိတ် - Fall 2015
ယင်းတင်ပါး၏ Deforming arthrosis
အမျိုးသမီးအင်္ကျီ - ဆောင်းဦးရာသီ-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ပန်းသီး, ဒိန်ခဲနှင့်ဥများနှင့်အတူသုပ် - အရသာမုန်၏ရိုးရှင်းပြီးမူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
ဗီရို, built-in နယ်ပယ်
ဇာတ်ကောင် accentuation အမျိုးအစားများ
Lumbar ကျောရိုး၏ protrusion ၏ကုသမှု
မိန်းမတို့အဘို့အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု - အားလုံးတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်,
Swimsuits Milavitsa 2015
ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ crystal ဘောလုံးကိုခန့်မှန်း - ကိုမည်သို့သုံးစွဲဖို့?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံး: ဂျက်စီကာ Alba သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူသူ့ကုမ္ပဏီရောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
ဆလရီအမြစ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ